200 Waxyaabaha Lagu Kala Saarayo Google algorithm | Martech Zone
Talaado, Juun 4, 2013 Douglas Karr
Hagaag, tani maahan wax fudud laakiin waa kudos Backlinko iyo SingleGrain isku soo wada duubista macluumaadkan ujeedadeedu waa kala-saaridda algorithm-ka Google darajadiisa. Xogta macluumaadka waxay ku dhex socotaa isirrada arrimaha, sababaha heerka bogga, sababaha heerka goobta, sababaha gadaal, isdhexgalka isticmaalaha, tilmaamayaasha dheeraadka ah iyo calaamadaha bulshada. Maadaama aysan codsanayn a miisaanka qodob kasta,
Ma lihi inaan liqi doono liistada… Ma aaminsani dhammaan darajooyinka saamaynta laakiin kuwa aan weli saamayn ku yeelan karin waxqabadkaaga mashiinka raadinta adoo kordhinaya heerka riixa-illaa. Si kastaba ha noqotee - waa liis aad u dhameystiran oo adiga kugu habboon inaad dib u eegto oo aad ka fikirto sidaad u wanaajiso waxyaabahaaga.
Liis aad u dhameystiran. Waxay keeneysaa iftiin badan oo ah sababta plugins-yada SEO ay u leeyihiin aqlabiyadda kor ku xusan iyaga dhexdooda. Tusaale ahaan, SEO Presser. Waad ku mahadsan tahay tan "dhammaan hal meel" arrimo darajayn.
Xalka Xogta Webex
Liis aad u xiiso badan! Waad ku mahadsan tahay dadaalka cajiibka ah
Jun 6, 2013 saacadu markay ahayd 7:50 AM
Kheyraad weyn Doug! Waxay noqon doontaa wax aan calaamadeeyo! Qaybta qodobka heerka goobta hoostiisa, nuxurka nuqul ka kooban ayaa leh "nuqul nuqul ah". Ight Waxaa laga yaabaa inuu doonayo inuu saxo.
Jun 13, 2013 saacadu markay ahayd 7:17 AM
Waad ku mahadsan tahay xogtan xog-ogaalka ah.
Hal tilmaan (marka laga reebo wixii Jacquelyn horey u soo dhigtay): waxaad u baahan kartaa inaad bedesho guntinta ku qoran "Time on Site" sidoo kale :).
Muuqaal sawir wanaagsan Haddii ay suurtagal tahay, magacaw boggaaga iyo URL-keeda adoo adeegsanaya erayga muhiimka ah. Waa in aad
sidoo kale u adeegso cinwaanka, sharaxaadda, iyo astaamaha meta ee boggaaga.
Qaarkood waxay yiraahdaan maalmahan Google uma fiirsanayo wax intaa ka badan oo ah tags loogu talagalay
Jul 27, 2015 markay ahayd 6:26 AM
Jul 27, 2015 markay tahay 12:46 PM
Oktoobar 10, 2015 at 11:48 AM
Wow hadda waxaan ka helay maqaalkan Google waxaanan aad ugu mahadnaqayaa Suuqgeynta Teknolojiyada Suuq geynta sida weyn ee loo yaqaan 'infograph' oo aad u fudud in la daryeelo.